Maxay ku bareysaa nolosha?
Nolosha waaa mid adag. Hadaba Maxay tahay nolosha? Maxay ku bareysaa nolosha? in la fahmo xaqiiqda nolosha maaraynta nolosha, farxada nolosha, qorshaynta nolosha, hamiga nolosha iyo horumarka nolosha ma ahan wax adag ee waxaa adag in la fahmo hadafka nolosha laga leeyahay.
Nolosha qofka Waxaa soo food saara xaalado adag oo kala gedisan. Nolosha adag ee qofka soo maro waxaa kamid ah kuwo wanaagsan oo farxad leh iyo kuwo murugo leh.
Sidoo kale dareenka nolosha adag ayaa qofba si, u dareemaa, sidaa daraadeed xaaladahaas kala duwani waxay nolosha ku abuuri karaan dareen aan fududeyn.
Qof walba wuxuu leeyahay qaab-dhaqan uu ku xaliyo xaalada adag ee nolosha kala soo dersa:
In aad wajahdo dhibka adag ayaa ku xiran hadba dhibtu inta ay la egtahay.
Nolosha: waxaad ku arkeysaaa wax wanaagsan iyo wax xun, nolosha waxa ay ku bareysaa dad wanaaagsan iyo dad xun.
Nolosha: waaa mid adag balse Waxaa ka sii adag in la fahmo xaqiiqda nolosha.
Maxay ka kooban tahay xaqiiqda nolosha?
Nolosha maanta weey ka duwanaan kartaa tii shalay, tan maantana waxa ay ka duwanaaan kartaa tan beri. Marka in loo dulqaato nolosha waa mid muhiim ah.
TALLOOYINKA XIKMADA NOLOSH
● Cilaaqada ama xiriirka kaliya aan marnaba xumaanin, fashilmin, khalkhal gelin, niyado xun la soo dersin iyo malooyin ayaa waxa ay tahay cilaaqada qofka ay kala dhexeyso Rabbigiisa, dariiqooyinka ugu daahirsan lagu joogtayn karo xiriirkaasi ayaa waxa uu yahay salaadda.
● Shakhsiyadda xoogga leh micnaheeda maaha inaad ku hadaaqdo hadalo liita ama af xumo ah ee xoogga waa xikmad ee maaha af xumo.
● Haddii aad shey doonaysid ka dalbo Rabbigaaga, si daran u dalbo, dalabkaaga ku celceli oo haka daalin, waxaase hubaal ah inuu Alle kaa ajiibayo, waayo Alle waa ku maqlayaa marka aad barido, waa ku arkayaa marka aad dhaqaaqayso, waana og yahay waxaad sameyso halbowlahaagana waa kaaga dhow yahay.
● Qalbiga waxa uu og yahay waxa uusan ku dhawaaqin carabka dhegahana aysan maqlin, adigana waa inaad ogaataa waxa carrabkaagu ku dhawaaqayo dhegtaadana ay maqlayso.
● Qofka aan dhadhamin qaraarka bilowga ma dhadhaminayo macaanka dhammaadka, qofka marwalba ka fekera dhammaadyadana bilow malaha meelna ma gaaro.
● Waxaa jira dad kuu dhakan oo sugayaan ilaa ka dhacayso, marka aad dhacdana ay kuu sheegayaan in ay filayeen mar hore inaad la kulmayso tan oo kale, Bal inta ay dadka ku mashquulayaan may ku mashquulaan naftooda, ogowna inaad naftaada ku mashquushid ay kaaga xaqnimo badan tahay inaad ku mashquusho geyrkaaga.
● Wax walbaa waxa uu la dhashaa subaxda, qaddarka, rajada, najaaxa, himmada, qisadii shalay waxay soo xirantaa subaxda, waxaana bilaabanaysa qisa cusub ee niyaddaada wanaaji kana run sheeg, waayo niyaddaada ayaa lagugu arsaaqayaa.
● Dhoola cadeey maanta si ay u ogaadaan dhamman in aad maanta in badan ka xoog badan tahay shalay, weji macbuusnimadana waxba kuuma soo siyaadinayso aan ahaynin in lagaa kala fiigo, sababta oo ah in aad walaalkaa ama walaashaa aad kula kulantid weji bashaash ah waa saddaqo.
● Saamixidda micnaheeda ma ahan inaad ku celiso isla tijaabadii midkii aad saamaxday, dhacdooyinka shalay waa dersiga maanta. sidaa darteed ceeb maaha in maanta dhagax ku hor kufto ee waxaa ceeb ah isla dhagaxii aad shalay maantana aad ku hor kufto.
Maxay ku baraysaaa nolosha?
Waxa ay ku bareysaaa xaqiiqda nolosha sida dadka maanta joogo iyo sida ay yihiin..
Maxaan kor ku soo xusnay, Hadii aan ku xusuusiyo?
Jawaabtu: Nolosha iyo marxaladaheeedu.
Maxaan dhahnay? Nolosha waxa ay ka kooban tahay..
farxad, murugo, khibrad, shalayto iyo xusuus.
Okey! Taasi waaan wada fahannay ayaan jecelahay.
Xaqiiqda Nolosha Dadka Maanta..
Dadka Dunida Maanta jooga hadii aad sidaan tahay....
1. Goortii aad saaxiibtimo muujiso Waxay u qaadanayaan inaad Shukaansi doon tahay.
2. Goortii aad Daacad tahay waxay u qaadanayaan inaad Xaasid tahay.
3. Goortii aad rabto inaad Keli ahaato waxay u qaadanayaan in Murugo ku heyso.
4. Goortii aad Aamusto waxay u qaadanayaan in Islaweyni kugu jirto.
5. Goortii aad runta ka hadasho waxay u qaadanayaan in aad Reer u dan leedahay.
6. Goortii aad is tiraahdo cid caawi, waxay u qaadanayan in aad Is tus-tus & ha lagaa sheego ka wado.
7. Goortii aad bilowdo in aad Dantaada garato, waxay u qaadanayaan in aad dadki ka go’day oo Buufis bilowday.
8. Goortii aad wadada si Nabad ah u socoto waxay u qaadanayaan in Kibir kaa buuxo.
9. Goortii aad hadal dabacsan ku hadasho waxay u qaadanayaan in aad daciif tahay.
10. Goortii aad kun wanaag sameyso waa iska indhatiraan, Laakiin goortii aad Hal qalad sameyso waxay wadayaan Sanado.
Si kastoo ay tahay, si kasta oo ay kuu xukmiyaan, wax kasta oo ay u qaataan Adigu ha joojin ee joogtee wanaag sameynta iyo in aad u dhoola cadeyso, Salaanto, Xushmeyso, u naxariisato, soo dhoweyso, cafiso, caawiso; kuwa runta ah isagama qaadanayaan ee waxay garan qiimahaaga qofnimo.
#Xaqiiqda #Nolosha #Dhabtaah #Farxad #Murugo #xusuus #Maaraynta #Khibrad